बागलुङमा मध्यराती रुवाउने घटना : रिप ऊहाँहरुको आत्माले शान्ति पाओस !! - Taja Report
Homeसमाचारबागलुङमा मध्यराती रुवाउने घटना : रिप ऊहाँहरुको आत्माले शान्ति पाओस !!
बागलुङमा मध्यराती रुवाउने घटना : रिप ऊहाँहरुको आत्माले शान्ति पाओस !!
June 26, 2018 समाचार Comments Off on बागलुङमा मध्यराती रुवाउने घटना : रिप ऊहाँहरुको आत्माले शान्ति पाओस !!
बागलुङ, १२ असार । बागलुङ जिल्लामा भिषण वर्षापछि गएराति गएको पहिरोले घर बगाउँदा एकै घरका तीनजनाको मृत्यु भएको छ ।
घरमै सुतिरहेको बेलामा एक्कासि खसेको ठूलो पहिरोमा परी उनीहरुको ज्यान गएको हो । पहिरोमा पुरिएका मृतक तीनै जनाको शव निकालिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका प्रहरी नायब उपरीक्षक विश्वराजसिंह थापाले बताए ।
यस्तै, हुग्दीखोलामा आएको बाढीले कैयौँ रोपनी खेत बगरमा परिणत भएको स्थानीयवासी प्रकाश छन्त्यालले बताए । जिल्लाभर भएको क्षतिको पूर्ण विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
पहिरो हटाई लोकमार्ग सुचारु गर्न प्रयास भइरहेको हटिया प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक टेकबहादुर खाडामगरले बताए । रातभर परेको अविरल वर्षापछि जिल्लाभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ । रासस
भिषण वर्षापछि गएराति गएका पहिराले मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्ड अवरुद्ध बनेको छ ।
पहिरो हटाई लोकमार्ग सुचारु गर्न प्रयास भइरहेको हटिया प्रहरी चौकीका प्रहरी सहायक निरीक्षक टेकबहादुर खाडामगरले बताउनुभयो । रातभर परेको अविरल वर्षापछि जिल्लाभरको जनजीवन प्रभावित भएको छ ।
काठमाडौंबाट धनगढी हिँडेकी महिलाको ह्याण्डब्याग खोलेर हेर्दा प्रहरी नै भए चकित !
बैतडी कैलपाल प्राथमिकता बीद्यालय सीबनाथका प्राध्यापकले दिउँसै मादक् पदार्थ सेवन गरि कार्यालयमा उतपात मच्चाएपछि आक्रोशित स्थानीयले प्राध्यापकलाई लछारपछार पारेका थिए । भिडियो हेर्नुहोस :